Zvekuchengetedza Zvematongerwo enyika | Franchiseek
Infinity Bhizinesi Yekukura Network Ltd inonzwisisa kuti kuvanzika kwako kwakakosha kwauri uye kuti une hanya nezvekuti rako pachako rinoshandiswa sei uye rinogoverwa online. Isu tinoremekedza uye tinokoshesa kuvanzika kwemunhu wese anoshanyira iyi webhusaiti, franchiseek.com ("Nzvimbo Yedu") uye tinongotora uye toshandisa data pachako munzira zvinotsanangurwa pano, uye nenzira inoenderana nezvisungo zvedu uye nekodzero dzako. pasi pemutemo.
Ndokumbirawo kuti muverenge iyi yePolisi Yechengetedzo nekuchenjerera uye muve nechokwadi chekuti munonzwisisa. Kugamuchirwa kwako kweSecurity Policy kunoonekwa kunge kuchiitika pane kwako kwekutanga kushandisa Nzvimbo Yedu Saiti. Iwe unozodikanwa kuti uverenge uye ugamuchire Iyi Seseti Yekuvanzika paunenge uchiita kuzadza chero mafomu ekutaurirana, mafomu ekunyorera pane yedu saiti Kana iwe usinga gamuchire uye uchibvumirana neiyi yeSecurity Policy, iwe unofanirwa kurega kushandisa yedu saiti nekukurumidza.
1. Tsanangudzo uye Kududzira
Mune iyi Pholisi, mazwi anotevera anoreva zvinotevera:
“Account” zvinoreva account inodiwa kuti uwane uye / kana kushandisa dzimwe nzvimbo uye zvikamu zveNzvimbo Yedu;
"Cookie" zvinoreva faira nyowani faira yakaiswa pakombuta yako kana mudziyo neIsaiti Yedu paunoshanyira zvimwe zvikamu zveNzvimbo Yedu uye / kana kana uchinge washandisa zvimwe zvikamu zveNzvimbo Yedu. Ruzivo rweMakuki anoshandiswa neSiti Yedu akarongwa muchikamu 13, pazasi;
"Mutemo weKuki" zvinoreva zvikamu zvakafanira zveChakavanzika uye neMagetsi Kuteedzerana (EC Directive) Mitemo 2003
"Data rako pachako" zvinoreva chero data uye zvese zvine chekuita nemunhu anozivikanwa anogona kuve akananga kana zvisina kunanga kuzivikanwa kubva kune iyo data. Mune ino kesi, zvinoreva munhu data yaunotipa kwatiri kuburikidza Nzvimbo Yedu Saiti. Tsanangudzo iyi, kana ichizoshanda, inobatanidza tsananguro dzakapihwa muDziviriro Dziviriro Act 1998 OR EU Regulation 2016/679 - iyo Gurukota reDziviriro Dare Regulation ("GDPR")
"Isu / Isu / Isu" zvinoreva Infinity Bhizinesi Kukhula Network Ltd, kambani yakadzikira yakanyoreswa muEngland pasi pekambani nhamba 9073436, ine kero kunyoreswa ndeye 2 Bromley Road, Seaford, East Sussex BN25 3ES, uye kero yavo huru yekutengesa iri sezviri pamusoro.
2. Ruzivo Nezvedu
Yedu saiti ndeyenzvimbo uye inoshanda neInfinity Bhizinesi Kukhula Network Ltd, kambani shoma yakanyoreswa muEngland pasi pekambani nhamba 9073436, ine kero kunyoreswa ndeye 2 Bromley Road, Seaford, East Sussex BN25 3ES uye ine kero huru yekutengesa yakaita sezviri pamusoro.
Nhamba yedu yeVAT ndeye 252 9974 63.
Wedu Dziviriro Dziviriro Officer ndiJoel Bissitt, uye anogona kufonerwa ne email pa [Email akadzivirira], parunhare panhamba dzinoti 01323 332838, kana neruoko pa 2 Bromley Road, Seaford, East Sussex BN25 3ES.
3. Ino Ndiro Inofukidzei?
Iyi Yakavanzika Policy inoshanda chete kune yako yekushandisa Saiti Yedu. Yedu Saiti inogona kuve nehukama kune mamwe mawebhusaiti. Ndokumbira utarise kuti Hatina wekutonga pamusoro pekuti data rako rinounganidzwa, kuchengetwa, kana kushandiswa nemamwe mawebhusaiti uye Tinokupa zano kuti uongorore marongero ezvekuvanzika kwemamwe mawebhusayithi akadaro usati waapa chero data kwavari.
4. Kodzero dzako
Sechinyorwa chedata, iwe une kodzero dzinotevera pasi peGDPR, iyo Iyi Pholisi uye Kushandisa kwedu kwedata data rakagadzirirwa kutsigira:
Iko Kodzero yekuziviswa nezve Wedu kuunganidzwa uye kushandisa kwemunhu data;
Kodzero yekuwanika kune yako pachako data Tinobata pamusoro pako (ona chikamu 12);
Kodzero yekugadzirisazve kana chero yako data Yatinobata pamusoro pako isiriyo kana isina kukwana (ndapota taura nesu uchishandisa iwo mashoko ari muchikamu 14);
Kodzero yekukanganikwa - kureva kodzero yekubvunza Isu kudzima chero data yega Tinobata pamusoro pako (Isu tinongobata yako data yega kune imwe nguva yakaderera, sezvakatsanangurwa muchikamu 6 asi kana uchida Iwe kuti Tidzime nekukurumidza, ndapota batana Nesu uchishandisa iwo mafomu ari muchikamu 14);
Iyo kodzero yekudzora (kureva kudzivirira) kugadziriswa kwe data rako rega;
Iyo kodzero yekubvumikisa data (kuwana kopi ye data rako rega kuti ushandise zvakare neimwe sevhisi kana sangano);
Iyo kodzero yekupokana Kwedu uchishandisa yako data yega kune zvimwe zvinangwa; uye
Kodzero zvine chekuita nesarudzo dzemagetsi uye profiling.
Kana iwe uine chero chikonzero chekunyunyuta nezve Kushandisa kwako kwega data, tapota taura nesu uchishandisa ruzivo rwakapihwa muchikamu 14 uye Tichaita zvatinogona kuti tigadzirise dambudziko iri kwauri. Kana Tisingakwanise kubatsira, iwe zvakare une kodzero yekuisa zvichemo neveku UK maneja wevashandi, Hofisi yeKomisheni Yemashoko.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kodzero dzako, ndapota taura nehofisi yeInternational Commissioner's Office kana yako Citizens Advice Bureau.
5. Idatai Yatinotora?
Zvinoenderana nekushandisa kwako Saiti Yedu, Tinogona kuunganidza zvimwe kana zvese zvinotevera zvemunhu uye zvisiri zvako - tapota onawo chikamu 13 pane Kushandisa kwedu ma Cookies uye akafanana tekinoroji:
bhizinesi / zita rekambani
yeruzivo rwemazita akadai emaema kero uye nhamba dzefoni;
ruzivo rwehuwandu hwenzvimbo dzakadai seposita kodhi, zvido, uye zvido;
ruzivo rwemari dzakadai sekwereti / nhamba yemakadhi echikwereti;
web browser mhando uye shanduro;
rondedzero ye URLs kutanga neinongedzera saiti, zviitiko zvako paSiti Yedu, uye saiti yaunobuda iwe;
Chero chero humwezve ruzivo hwaunosarudza kugovana
6. Tinoshandisa Sei Data Rako?
Yese data yemunhu inogadziriswa uye ichichengetedzwa zvakachengetedzeka, nekuti hazvisisiri kupfuura zvakafanira muchiedza chechikonzero (s) icho chakatanga kuunganidzwa. Isu tichaenderana nezvisungo zvedu uye chengetedza kodzero dzako pasi peiyo Dziviriro Dziviriro Act 1998 & GDPR nguva dzese. Kuti uwane mamwe mashoko nezve kuchengeteka ona chikamu 7, pazasi.
Iko kushandisa kwedu kwega data mune Zvatinofarira zviri pamutemo. Kunyanya, Tinogona kushandisa yako data kune zvinotevera zvinangwa:
Kupa uye kubata yako Akaunti uye kubvunza kusanganisira kupfuudza ako ruzivo kune akakodzera vashambadziri pane yedu saiti
Kupa uye kutonga kwako kuwana kune yedu saiti;
Kugadzirisa uye kugadzirisa kwako ruzivo pane Yedu Saiti;
Kugovera Zvigadzirwa zvedu Uye / KANA masevhisi kwauri (tapota cherekedza kuti Tinoda yako yedata data kuti upinde muchibvumirano newe);
Kugadzirisa uye kugadzirisa Zvigadzirwa zvedu Uye / KANA mabasa kwauri;
Kupindura kumaema kubva kwauri;
Kukupa iwe maemail ayo iwe wakasarudza mukati (iwe unogona kuzvinyoresa kana kubuda chero nguva nekunyora pane yedu saiti
Kuongorora mashandisiro ako eIsaiti Yedu uye kuunganidza mhinduro yekugonesa kuti isu tigone kuramba tichivandudza Nzvimbo Yedu uye yako yevashandisi ruzivo;
Nemvumo yako uye / kana panobvumidzwa nemutemo, Tinogona zvakare kushandisa yako data kune zvinangwa zvekushambadzira izvo zvinogona kusanganisira kukubata newe email Uye / KANA foni Uye / KANA SMS mameseji meseji uye / kana kutumira neruzivo panzvimbo yevashambadziri vedu, nhau uye zvinopihwa pane Zvigadzirwa zvedu Uye / KANA Isu hatizo, zvakadaro, tikutumire chero kushambadzira kusingakumbirwi kana spam uye tinotora matanho akakwana ekuona kuti Isu tinochengetedza zvizere kodzero dzenyu uye tinotevedzera Zvido zvedu pasi peData Kudzivirirwa Mutemo 1998 OR GDPR uye iyo Yakavanzika uye Yemagetsi Kutevedzera (EC Directive) Mitemo 2003.
Uye / KANA
Vatatu mapato ane zvirimo zvinoratidzika pane yedu Siti anogona kushandisa wechitatu bato ma Cookies, sezvakatsanangurwa pazasi muchikamu 13. Ndokumbira utarise kuchikamu 13 kune rumwe ruzivo nezve kudzora ma Cookies Ndapota cherekedza kuti Hatidzore zviitiko zvemapato akadaro, kana data ravanounganidza voshandisa uye vanokupa zano kuti uongorore zvakavanzika zvemapato ezvitatu akadaro.
Une kodzero yekubvisa mvumo yako Kwatiri uchishandisa data rako pachako chero nguva, uye kukumbira kuti Tinozvibvisa.
Isu hatichengete yako yemunhu data kwenguva refu kupfuura zvakafanira muchiedza chechikonzero (s) icho chakatanga kuunganidzwa. Iyi data ichave yakachengetwa kwenguva dzinotevera (kana kuti kuchengetwa kwayo kuchizotemerwa pane zvinotevera zvigadziko):
Kusvikira Iwe uchishuvira kunyora kuburikidza newebsite yedu.
7. Sei uye Ndekupi kwatinochengeta Yako Dhata?
Isu tinongochengeta yako pachako data kwenguva yakareba sekuda Kwatinoda kuitira kuti tishandise sezvakatsanangurwa pamusoro pechikamu 6, uye / kana kwenguva yakareba Tine mvumo yako yekuzvichengeta.
Mamwe kana ese data rako rinogona kuve rakachengetwa kunze kweEuropean Economic Area ("iyo EEA") (Iyo EEA inosanganisira nyika dzose dziri nhengo dzeEU, pamwe neNorway, Iceland, uye Liechtenstein). Iwe unofungidzirwa kugamuchira uye kubvuma kune izvi nekushandisa yedu saiti uye kuendesa ruzivo kwatiri. Kana isu tikachengeta data kunze kweEEA, Tichatora matanho akakwana ekuona kuti data rako rakabatwa zvakachengetedzeka uye zvakachengeteka sezvingave mukati meUK uye pasi peData Protection Act 1998 OR GDPR inosanganisira:
Kushandisa maseva akachengeteka uye dzimwe nzira dzekuvhaira dzakapihwa neWedu webhusaiti kugamuchira uye wechitatu wevatengesi.
Kuchengetedza data kwakakosha kwazvo Kwatiri, uye kuchengetedza data rako Takatora matanho akakodzera kuchengetedza uye kuchengetedza dhata yakaunganidzwa kuburikidza Nzvimbo Yedu Saiti.
Matanho Atinotora kuchengetedza nekudzivirira ako data anosanganisira:
Kushandisa maseva akachengeteka uye dzimwe nzira dzekuvhaira dzakapihwa neWedu webhusaiti kugamuchira uye wechitatu wevatengesi
8. Isu Isu Tinogovana Nhamba Yako Dhata?
Isu tinogona kugovana data rako nemamwe makambani ari Muboka Redu nekuda kwekushambadzira. Izvi zvinosanganisira Wedu subsidiaries Uye Yedu inobata kambani nekambani dzayo.
Tinogona dzimwe nguva kubvumirana nevechitatu mapato kuti tikuge zvigadzirwa uye masevhisi kwauri panzvimbo pedu. Izvi zvinogona kusanganisira kubhadharisa kubhadhara, kuendesa zvinhu, injini dzekutsvaga, kushambadzira, uye kushambadzira. Mune zvimwe zviitiko, mapato echitatu anogona kuda kuwana kune mamwe kana ese data rako. Iko kupi zvako kwe data yako kunodiwa kune chinangwa chakadai, Tichatora matanho ese ane hungwaru kuti uve nechokwadi chekuti data rako richagadziriswa zvakachengeteka, zvakachengeteka, uye zvinoenderana nekodzero dzako, Zvisungo zvedu, uye zvisungo zvemunhu wechitatu pasi pemutemo. .
Tinogona kuunganidza huwandu nezvekushandiswa kweSaiti Yedu kusanganisira data pane traffic, maitiro ekushandisa, nhamba dzevashandisi, kutengesa, uye rumwe ruzivo. Yese data rakadaro harizo zivikanwe uye harizobatanidza chero data pachako rinozivisa, kana chero risingazivikanwe data rinogona kusangana pamwe nedata uye rinoshandiswa kukuzivisa iwe. Isu tinogona kubva nguva nenguva tichigovana data rakadai kune vechitatu mapato akadai sevanoda kuzoita investimendi, vanobatanidzwa, vatinoshanda navo, uye vashambadziri. Iyo data ichagoverwa chete uye inoshandiswa mukati memiganhu yemutemo.
Dzimwe nguva tinogona kushandisa chetatu data data processors iyo iri kunze kweEuropean Economic Area ("iyo EEA") (Iyo EEA inosanganisira nyika dzose dziri nhengo dzeEU, pamwe neNorway, Iceland, neLiechtenstein). Kwatinoendesa chero ruzivo rwevanhu zviri kunze kweEEA, Tichatora matanho ese ane hungwaru kuona kuti data rako rinobatwa zvakachengetedzeka uye zvakachengeteka sezvingave mukati me UK uye pasi peData Kudzivirirwa Mutemo 1998 OR GDPR
Mune mamwe mamiriro ezvinhu, Tinogona kuve tichidikanwa zviri pamutemo kugovana yakati data yakachengetwa Nesu, iyo inogona kusanganisira yako pachako data, semuenzaniso, iko Isu tichiita matanho epamutemo, uko Tiri kutevedzera zvinodiwa pamutemo, court court, kana hurumende masimba.
9. Chii Chinoitika Kana Bhizinesi Redu Likachinja Maoko?
Isu tinogona, nguva nenguva, kuwedzera kana kuderedza Bhizinesi redu uye izvi zvinogona kusanganisira kutengesa uye / kana kuchinjisa kwekutonga kwevese kana chikamu chebhizinesi Redu. Chero data yaunoverengera yawakapa ichaenda, painenge ichienderana nechero chikamu chebhizinesi redu iri kutamiswa, ichipfuudzwa pamwe chete neiyo chikamu uye muridzi mutsva kana bato richangodzora bato rinobvumirwa kushandisa iyo data chete nekuda kwezvinangwa zvimwe chete izvo izvo zvakavanga zvakaunganidzwa nesu.
Muchiitiko chekuti chero data rako richizoendeswa nenzira yakadai, hauzowaniranwa pachine nguva uye uziviswa nezve shanduko. Nekudaro uchapihwa sarudzo yekuti data rako ribviswe muridzi mutsva kana controller.
10. Unogona Sei Kudzora Dhata Rako?
Kuwedzera kune kodzero dzako pasi peGDPR, yakarongedzwa muchikamu chechina, kana uchiendesa yako pachako data kuburikidza neIsaiti Yedu, iwe unogona kupihwa sarudzo yekudzora Kushandisa kwedu data rako. Kunyanya, Isu tinoda kukupa kudzora kwakasimba pane Iko kushandisa kwedu data rako kune zvakananga kushambadzira zvinangwa (kusanganisira kugona kusarudza kubva mukugamuchira maemail kubva kuUye iwe aungaite nekurega kunyora uchishandisa maratidziro akapihwa muYedu emails uye ipfungwa yekupa. zvinyorwa zvako
Iwe unogona zvakare kuda kusaina kusvika kune imwechete kana kupfuura eanoshumirwa masevhisi anoshanda muUK: Iyo Nhare Inofarira Service ("iyo TPS"), Corporate Runhare Rudzi Rutsvairo ("CTPS"), uye Mailing Preference Service (" iyo MPS ”). Izvi zvinogona kubatsira kudzivirira iwe kugamuchira kushambadzira kushambadzira. Ndapota cherekedza, zvisinei, kuti masevhisi aya haakudziviri iwe kubva mukugamuchira kushambadzira kutaurirana iwe unobvuma kugamuchira.
11. Kodzero Yako Yekurambidza Ruzivo
Iwe unogona kuwana dzimwe nzvimbo dzeSiti yedu pasina kupa chero data zvachose kusasanganisa makuki. Nekudaro, kuti ushandise ese maficha uye mabasa aripo pane yedu Saiti iwe unogona kuve unofanirwa kuendesa kana kubvumira kuunganidzwa kweimwe data.
12. Ungasvikira Sei Dhata Rako?
Iwe une kodzero yekubvunza kopi yeipi yako data yega yakabatwa Nesu Under GDPR, mubhadharo we £ 10 unobhadharwa uye Tichapa chero neruzivo rwese mukupindura chikumbiro chako mukati memazuva makumi mana. Ndokumbira kuti ubate Isu kuti uwane mamwe mashoko ku [Email akadzivirira] kana kushandisa nzira dzekusvirana pazasi muchikamu 14. Zvimwe, ndapota tarisa kune yedu Dziviriro Dziviriro tsika pano
13. Kushandisa Kwedu Cookies
Yedu Saiti inoshandisa makuki kupa iyo yakanakisa mushandisi ruzivo rwekushanya kwako. Kuti uone zvizere ruzivo rweyedu cookie sera ndapota shanya franchiseek.com/cookie-policy
14. Kubata Nesu
Kana iwe uine chero mibvunzo nezve Nzvimbo Yedu kana iyi Yakavanzika Policy, tapota taura nesu ne email pa [Email akadzivirira], parunhare panhamba dzinoti +44 1323 332838, kana kutumira pa2 Bromley Rd, Seaford, East Sussex, BN25 3ES. Ndokumbira uve nechokwadi chekuti mubvunzo wako wakajeka, kunyanya kana iri chikumbiro cheruzivo nezve data Tinobata pamusoro pako (sepasi pechikamu 12, pamusoro).
15. Shanduko kune Yedu Yakavanzika Policy
Tinogona kushandura iyi yeVanzika Policy nguva nenguva (semuenzaniso, kana mutemo uchinja). Chero shanduko dzinozotumirwa paNzvimbo yedu uye iwe unozofungidzirwa kuti wagamuchira mutemo weChakavanzika chekushandisa kwako kwekutanga kweIsaiti Yedu uchitevera shanduko. Isu tinokurudzira kuti utarise peji ino nguva dzose kuti uwane hunyanzvi.